MAHAFINY Mitsubishi T-2 FSX SP2 & P3D - Rikoooo
Downloads 10 241
Mpanoratra: Tim Piglet Conrad - Piglets Planes
Ny fiaramanidina japoney voalohany, ity modely virtoaly ity dia omen'ny Tim Conrad malalantsika.
Ny planeta manana fahamendrehana saingy azo tanterahina tsara, ny model dia mitovy amin'ny Frantsay Jaguar. Full 3D VC ary tadiavina, horonam-peo HD miaraka amin'ny fisaintsainana mivantana, miaraka amin'ny famerenana roa sy feo mahazatra.
Tsy maintsy manome izany ezaka izany ianao.
Ny Mitsubishi T-2 dia fiaramanidina mpamily fiaramanidina natao sy novokarin'i Japan. Mazava ho azy fa ny SEPECAT Jaguar dia manentana azy ary koa fitaovana miaraka aminy (ny Adour Rolls-Royce / Turbomeca naorina ambany lisansa). Ny T-2 dia nanamboatra kopia 90 napetraka tao amin'ny 1975, ary ny fiaramanidin'ny fiaramanidina tatỳ aoriana izay nantsoina hoe Mitsubishi F-1.